ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ्गमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको शाखा विस्तार, गाउँपालिका अध्यक्ष राईद्वारा उद्घाटन
ARCHIVE, CORPORATE » ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ्गमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको शाखा विस्तार, गाउँपालिका अध्यक्ष राईद्वारा उद्घाटन
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिका वडा नं.५मा आफ्नो ८० औं शाखा विस्तार गरेको छ । मिति २०७५ बैशाख २८ गते शुक्रवार मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिका अध्यक्ष मोती राज राईले उक्त शाखा कार्यालयको समुद्घाटन गरे ।
शाखा कार्यालय समुद्घाटन गर्दै राईले नेपाली समाज सुहाउँदो वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको बैंक मानेभञ्ज्याङ्गमा आउनु भनेको स्थानीय जनताको लागि निकै खुसीको विषय भएको बताए । यस विकास बैंकको लघुवित्त सेवा सहित यस क्षेत्रमा आउँदा बैंकको नारा “जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ” भन्ने मर्मलाई प्रमाणित गरेको उनले बताए ।
बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारा मानन्धरले बैंकको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै बैंकको वर्तमान अवस्था र सेवा विस्तारमा बैंकले लिने भावी रणनीतिको बारेमा जानकारी गराए । सो क्रममा उनले मुक्तिनाथ विकास बैंक ग्राहकहरुको आवश्यकता र चाहना अनुरुपको वित्तीय सेवा प्रदान गर्नको लागि ग्राहकहरुलाई सहज पुर्याउन घरदैला मै सेवा प्रदान गरिरहेको बताए । कृषिमा व्यवसायिक सुधार गर्दै ग्रामीण भेगका जनताको आर्थिक तथा समाजिक स्तर उकास्नको लागि बैंक हरपल तत्पर रहेको उनले बताए । साथै मानेभञ्ज्याङ्ग क्षेत्रमा स–साना बचतकर्ता तथा उद्यमीलाई आर्थिक उन्नतिमा सहयोग गर्न बैंक तत्पर रहेकोले सहकार्य गर्न स्थानीयको पनि सहयोग रहेको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकको चुक्ता पूँजी रु. २ अर्ब ५९ करोड, कुल निक्षेप रु. २४ अर्ब ५५ करोड कुल लगानी रु. २१ अर्ब ९९ करोड गर्दै संचालन मुनाफामा रु. ४२ करोड ७५ लाख खुद नाफा गरेको छ ।